Mashoko anobatsira kune vose - avo vanoda kuziva uye vanoda chizivo!
Pukunyuka Ghost Town: kudarika mutambo
Nhoroondo dzekare dzeRussia. Magamba ezvinyorwa zveRussia yekare
Nzombe mumapoto muchoto - chikafu chinonaka uye chepakutanga
Nguruve muhari muchoto ichibva inonaka uye ine nyoro kana pasina kana kuwedzera miriwo. Nhasi tichakurukura chisarudzo chekutanga. Pashure pezvose, nzira chete yekuti iwe ugone kubika mwoyo uye ...
Mambo weEngland George 5
Hamu yekutanga yehupenyu hwaGeorge (1865-1936) yaiva muzana remakore rechi19, yechipiri muzana remakore rechi20. Makore ekutonga kwake (1910-1936) akazove asina kunyarara zvikuru kuUk uye pasi rese. George 5 akaona yekutanga ...
"Props" - chii ichocho? Ndeipi iyo inoshandiswa uye nei?
Izwi rakauya kumutauro wedu kubva kuItaly. Props - chii ichocho? Hanyengeri, zvinhu zvemitambo, mazamu, ayo anoshandiswa panhandare panzvimbo yeiyi. Shandisa Zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakasiyana-siyana. In ...
SAU "Peony". Zvombo zvekuzvidzivirira 2C7 "Peony": tsanangudzo yezvakagadzirwa nemifananidzo
203-mm pfuti inoputika 2С7 (chinonzi 216) inoreva zvombo zvezvombo zvekuchengetedzwa kweHigh Command. Ari muuto, akagamuchira zita rekodhi - ACS "Peony". Mifananidzo iri munyaya ino inonyatsoratidza iyo yose ...
Zvinhu zvesayenzi uye zvigadzirwa zvemichina. Teknolojia yezvinhu zvokuvaka
Iyo yakasarudzwa "zvinhu zvesayenzi uye teknolojia yezvinhu" ndeimwe yezvinyanya kukosha zvevadzidzi vose vejinijini. Kuumba zviitiko zvitsva zvinogona kukwikwidzana mumisika yepasi rose, hazvibviri kufungidzira nekuita ...
Chii chinonzi mesolithic? Zvisizvo - zvinotangira kukurudzirwa kwevanhu vose
Kuti tinzwisise kuti nguva ipi ichakurukurwa pano, ngationei muchidimbu nhoroondo yekusimudzirwa kwevanhu. MuChechi Chizvarwa, sangano rekare rakabuda, iro raivapo BC rinenge makore 36 makore. Inovhara iyo ...
Tumira uye ubudise kunze kweGermany
Munhu wose anoziva kuti nheyo yesimba uye simba rekunze chero huripo huri hurizvino hupfumi hwayo hwakagadzirwa mune zvose. Nyika imwe neimwe ine zviratidzo zvakasiyana zvekutengeserana mukati nekunze, asi zviri nyore kufungidzira ...
Phraseologism "gerostratum kubwinya": kududzira uye etymology
Vamwe vanhu vakagadzirira kuenderera mberi kuzova mukurumbira, kuti vave vakakurumbira. Muzera redu remichina yezuva ranhasi, zvatova nyore kuwana kupararira kwakawanda nekuda kweInternet. Zvisinei, kuwana mukurumbira, vamwe ...
Nzira yekushandisa shanduro chaiyo
Nyaya dzinokosha chikamu cheChirungu. Asi zvinosuruvarisa, nyaya iyi haisi nguva dzose yakajeka kune vadzidzi vanotaura chiRussia. Nokuti mumutauro wavo wekutaura chimwe chinhu chakafanana hachipo. Zvisinei, mitemo ...
Utumbo hwepamuviri: zviratidzo, zvinokonzera
Zvinowanzoitika kuti munhu anotanga kukuvadza mudumbu rake pasina chikonzero chaicho. Muchiitiko ichi, tinogona kutaurirana pamusoro pehutachiona. Izvi ndizvo zvandinoda kutaura zvino. Chii ...
peji 1 peji 2 ... peji 9 695 Next Page